I-Inkscape 1.1 ifika ngeScreen esamkelekileyo, ukuPhuculwa kwebhokisi yencoko yababini kunye nokunye okungaphezulu Ubunlog
I-Inkscape 1.1 iza nescreen sokwamkela, ibhokisi yencoko yababini kunye nezinye
Emva konyaka wophuhliso kwabhengezwa ukukhutshwa kwenguqulelo entsha ukusuka kumhleli wegraphic vector yasimahla I-Inkscape 1.1. Kule nguqulo intsha yongeze isikrini sokwazisa ngokusungulwa kwenkqubo, Inika useto olusisiseko njengobungakanani bexwebhu, umbala we-tovas, umxholo wolusu, iseti ye-hotkey, kunye nemowudi yombala, kunye noluhlu lweefayile ezisandula ukuvulwa kunye neetemplate zokwenza amaxwebhu amatsha.
Inkqubo yokumisa incoko yabhalwa kwakhona, ekuvumela ngoku ukubeka iibar zesixhobo kungekuphela ngasekunene, kodwa nakwicala lasekhohlo lendawo yokusebenza, kunye nokucwangcisa iipaneli ezininzi kwibhloko kunye nokutshintsha usebenzisa iithebhu kunye neepaneli zokuntywila. Uyilo lwepaneli kunye nobukhulu ngoku zigcinwa phakathi kweeseshoni.
Ibhokisi yencoko yababini ifakiwe ukufaka imiyalelo (command palette) ebonakala xa ucinezela "?" kwaye wena ivumela umsebenzisi ukuba akhangele kwaye abize imisebenzi eyahlukeneyo ngaphandle kokufikelela kwimenyu ngaphandle kokucinezela amaqhosha ashushu. Xa ukhangela kunokwenzeka ukuba uchaze imiyalelo kungekuphela ngamaqhosha esiNgesi, kodwa nangokunika inkcazo, uthathela ingqalelo ubume bendawo. Usebenzisa iphalethi yomyalelo, unokwenza izinto ezinxulumene nokuhlela, ukujikeleza, ukulahla utshintsho, ukungenisa idatha kunye nokuvula iifayile, kuthathelwa ingqalelo imbali yokusebenza namaxwebhu.
Isixhobo seCalligraphy ngoku sinakho ukubalula iiyunithi zobubanzi ngokuchaneka kweendawo ezintathu zokugqibela (umzekelo, 0,005).
Kwidayalog yokuthumela ngaphandle kwifomathi yePNG, isidingo sokongezwa konqakrazo kwiqhosha 'lokuThumela kwelinye ilizwe' lisusiwe (cofa nje 'Gcina'). Xa uthumela kwelinye ilizwe, kunokwenzeka ukugcina iifomathi ze-raster JPG, TIFF, PNG (elungiselelwe) kunye neWebP ngokuthe ngqo ngokukhetha ulwandiso lwefayile efanelekileyo xa ugcina.
Yongeze ujongano ukukhangela useto ngolusu.
Imowudi yokujonga ngaphezulu kweContour iphunyeziwe, apho imijikelezo kunye nomzobo ziboniswa ngaxeshanye.
Ukhetho "lweSikali" longeziwe kwizixhobo zePen kunye nePensile ngokuchaza ngokuthe ngqo ububanzi bemilo eyenziwe ngokhetho lwe "Shape".
Imowudi yokhetho entsha yongezwa, ekuvumela ukuba ukhethe zonke izinto, umda wazo ungekho ngaphakathi kuphela, kodwa unqamleza nendawo yokhetho echaziweyo.
Yongeze i-LPE entsha (i-Live Path Effect) icandelo lesiphumo, likuvumela ukuba wahlule into ibe ngamacandelo amabini okanye nangaphezulu ngaphandle kokutshabalalisa umbono wokuqala. Ungasitshintsha isitayile secandelo ngalinye, kuba icandelo ngalinye liphathwa njengezinto ezahlukileyo.
Ukulahla izinto kwibhodi eqhotyoshwayo ukuya kwilaphu ngoku lenza into ekhethiweyo ngoku ngokungagqibekanga.
Yongezwe iseti yesiko yezikhombisi zemouse esekwe kusetyenziso lwefomathi ye-SVG kwaye yahlengahlengiswa kwimiboniso ye-HiDPI. Xa ungenisa iifayile ze-SVG kwiCorelDraw, iileya ziyaxhaswa.
Inkxaso yokulinga kuMphathi weZongezo yongezwa, onokufaka kuyo ulongezelelo olongezelelweyo kunye nokuhlaziya esele ikho.
Ekugqibeleni, ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo malunga nenguqulelo entsha ye-Inkscape 1.0.2 ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-Inkscape 1.1 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Okokugqibela, kwabo banomdla wokukwazi ukufaka le nguqulo intsha ku-Ubuntu nakwezinye iinkqubo ezivela ku-Ubuntu, kufuneka bavule i-terminal kwinkqubo, oku kunokwenziwa ngokudityaniswa kweqhosha "Ctrl + Alt + T".
Kwaye kuye siza kuchwetheza lo myalelo ulandelayo esiza kongeza ngayo indawo yokugcina isicelo:
Uyenzile le nto ukufaka i-inkscape, Kufuneka sichwetheze umyalelo:
Enye indlela yofakelo ngoncedo lwe Iiphakheji zeplppak kwaye eyona nto ifunekayo kukuba inkxaso yongezwa kwinkqubo.
Kwisiphelo kufuneka sichwetheze lo myalelo ulandelayo:
Okokugqibela enye yeendlela ezinikezelwa ngokuthe ngqo ngabaphuhlisi be-Inkscape, yile usebenzisa ifayile yeAppImage onokuzikhuphela ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yosetyenziso. Kwimeko yale nguqulo, unokuvula i-terminal kwaye kuyo unokukhuphela iapplication yale nguqulo yamva ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Yenza ukhuphelo, ngoku kuya kufuneka unike imvume kwifayile ngalo myalelo ulandelayo:
Yiyo ke loo nto, ungaqhuba usetyenziso lomfanekiso ngokunqakraza kabini kuwo okanye kwisiphelo sendlela ngomyalelo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » I-Inkscape 1.1 iza nescreen sokwamkela, ibhokisi yencoko yababini kunye nezinye
Uhlaziyo kuhlobo 1.1 lwe-Inkscape lwalungazinzanga kum, luyavala xa ndifuna ukungenisa umfanekiso we-bitmap. Lungisa oku kungekudala okanye kuya kufuneka nditshintshe iinkqubo zokudweba.
Ndizamile Ubuntu 21.04 kwiRaspberry Pi 4 kwaye, uxolo, kodwa hayi
I-Linux 5.13-rc3 ifike izolile kakhulu kunokuba kufanelekile okwangoku